तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहको सालिक सिंहदरबारको मूल ढोका सामुन्ने नठड्याइएको भए कहाँ हुन्थ्यो होला ? वास्तवमा त्यो सालिकलाई त्यहाँ राख्ने सुरुको निर्णय नै थिएन । निर्णय थियो, “चन्द्रागिरिमा राख्ने । ” पछि कसैको आदेशले निर्णय नै परिवर्तन गरियो र सालिकलाई ल्याएर सिंहदरबारको मूल ढोका अघिल्तिर ठड्याइयो ।
पृथ्वी जयन्ती मूल समारोह समितिको कार्यालय थियो– घण्टाघरतर्फको त्रिचन्द्र कलेजमा । समितिका पदाधिकारीमा मुख्य चौतरिया फत्तेजङ्ग पराक्रम शाह, फिल्ड मार्सल केशरशमशेर जबरा, सर्दार नरेन्द्रमणि आदि, साहित्यकार बालकृष्ण समलगायत रहेका थिए । छ दशकअघि समितिको त्यो बैठकको स्मरण गर्दै इन्जिनियर शङ्करनाथ रिमालले भने , “पृथ्वीनारायणको सालिक राख्ने निर्णय भयो । मलाई सालिक राख्नका लागि स्मारकको डिजाइन गर्न जिम्मा दिइयो । ” सालिकको डिजाइन गर्ने जिम्मा बालकृष्ण समले पाउनुभयो भने सालिक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी कलाकार अमर चित्रकारलाई दिइयो ।
इन्जिनियर रिमालले सुरुमा पृथ्वीनारायण शाहले चन्द्रागिरिबाट उपत्यका देखेको र चन्द्रागिरिमा स्मारक राख्दा हिमाल, पहाड र तराई देख्न सकिने सोचले चन्द्रागिरिमा निर्माण गर्नका लागि स्मारकको नमुना तयार गरे । त्यस स्थानलाई चन्द्रजस्तो आकार भएको पहाड (गिरि) भएकाले परम्परादेखि नै चन्द्रागिरि भनिँदै आएको थियो । स्मारक निर्माण गरी सालिक राखिएको भए त्यो बेला नै चन्द्रागिरिलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गरिएको हुन्थ्यो । हाल चन्द्रागिरि हिल्सले भालेश्वर नजिक पृथ्वीनारायणको सालिक राखेको छ ।
“स्मारक निर्माण गरी सालिक राख्ने कुरा धेरै वर्षसम्म चलिरह्यो”, उनले भने , “त्यसबीचमा राजा महेन्द्रलाई हृदयाघात पनि भयो । पछि पृथ्वी जयन्ती समारोह समितिका पदाधिकारीहरू पनि कताकता पुगे । सालिक बन्यो र खै कसको आदेशमा सिंहदरबारअगाडि राख्ने निर्णय भयो । ”
सालिक राख्नुअघिसम्म सो स्थान खाली थियो । राणाकालसम्म पुतलीसडकतर्फको बाटो होचो थियो । त्यहाँ ‘बाइपास’ थियो । भद्रकालीदेखि सिंहदरबारतर्फ टुकुचामा फलामे पुल थियो । दुवैतर्फ अग्ला इँटका पर्खाल र माथि फलाम राखेर बनाइएको परम्परागत पुल थियो । त्यही पुल तरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबरा ४४ नम्बरको रातो मर्सिडिज कारबाट सहर प्रवेश गर्थे । उनको छोरा विजयशमशेरको कार नम्बर ४३ थियो । धेरै पछि मात्रै पुतलीसडकदेखि माइतीघर छिचोल्ने सडक निर्माण गरिएको हो । इन्जिनियर रिमालले २०१३÷१४ साल ताक टुकुचामा पुल बनाइएको बताए ।
बालकृष्ण समको निर्देशनमा बनेको सालिकमा पृथ्वीनारायण शाहको औँला अवगुण्ठन मुद्रालाई जनाउँछ । शताब्दीपुरुष सत्यमोहन जोशीले नेपाली कलाका रूपरेखा पुस्तकमा यसरी उल्लेख गरेका छन् “मूर्तिकारद्वारा यस प्रतिमामा आगम शास्त्रीय लक्षणअनुसार राष्ट्रिय एकता राष्ट्रलक्ष्मी सुरक्षित होस् भन्ने भावनामा जुन अवगुण्ठन मुद्रा प्रदर्शन
इन्जिनियर शङ्करनाथ रिमालले भने पृथ्वीनारायण शाहले आफूतर्फ उठाएका
औँलाले अवगुण्ठन मुद्रा नजनाउने दाबी गरे । “औँलाको मुख आफूतर्फ उठाउनु अवगुण्ठन मुद्रा हुँदैन”, उनले भने । वाल्मीकि क्याम्पसमा योग विषय अध्यापन गर्दै आउनुभएका डा. हरिप्रसाद पोखरेलले पृथ्वीनारायण शाहले ठड्याएको औँलाको मुद्रा अवगुण्ठन नभएको बताउँदै अवगुण्ठन मुद्रामा दुवै हात जोड्नुपर्दछ भने । गोर्खा पत्र
ममा माथवरसिंह थापा गोली हानी मार्ने जंगबहादुर कुँवरले नेपाल दरबारबाट निम्न प्रकारका शिक्षा पाए -
मृत्यु वि.सं. १९३३ मा पत्थरघट्टामा यिनको मृत्यु भयो। उनी संग उनका तीन रानी सति गए ।
यो पनि पढ्नुहोस:-भीमसेन थापा : उनको दर्दनाक मृत्यु र टाउकोको रहस्य
पालको दोस्रो तथा सबैभन्दा लामो समयसम्म पदमा रहेका नेपालका प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय विभूति हुन् भीमसेन थापा । सन् १७७५ अगस्ट (वि.सं. १८३२ श्रावन ९)मा जन्मिएका थापाको राजा रणबहादुर शाहका शाही सचिव तथा सल्लाहकार भएपछि उदय भएको हो । सन् १८०० मा रणबहादुर अधित्याग गरेर निर्वासित जीवन बिताउन भारतको वाराणसी जाँदा भीमसेन थापा पनि सँगै गएका थिए । यसै कृतज्ञताका कारण, रणबहादुर शाहले भीमसेन थापालाई नयाँ विस्तारित सरकारमा मन्त्री सरहको पद को पदमा नियुक्त गरे । सन् १८०६ मा रणबहादुर शाहको हत्या उनकै सौतेनी भाइ शेरबहादुर शाहद्वारा भए पश्चात भीमसेन थापाले ९३ जनाको हत्या गरेर स्वयं आफू प्रधानमन्त्री बने ।
भीमसेन थापाको प्रधानमन्त्रीकालमा नेपाल साम्राज्यको निक्कै विस्तार भएको थियो । त्यस समयमा यस साम्राज्यको सिमाना पश्चिममा सतलज नदी र पूर्वमा टिस्टा नदी सम्म पुगेको थियो । तर, सन् १८१४-१८१६ सम्म नेपाल विनाशकारी अङ्ग्रेज-नेपाल युद्धमा फस्यो, जसको फलस्वरूप नेपालले सुगौली सन्धि गरेर आफ्नो एक तिहाई जमिन इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई बुझाउनु परेको थियो । यस युद्धमा पराजयकै कारण नेपालमा ब्रिटिश रेसिडेन्सीको स्थायित्व कायम भएको थियो ।
सन् १८१६ मा राजा गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको मृत्यु भयो। तथा उनको उत्तराधिकारी राजा राजेन्द्र विक्रम शाह सानै भएको कारण रानी ललित त्रिपुरा सुन्दरी (रणबहादुर शाहकी कान्छी श्रीमती)ले सत्ता समालेकी थिइन्। केही दरबारियाको समर्थनकै कारण नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा हार भएता पनि भीमसेन थापा शक्तिमै रहेका थिए ।
सन् १८३२ मा उनको ठुलो समर्थक रानी ललित त्रिपुरा सुन्दरीको मृत्यु तथा राजा राजेन्द्र विक्रम शाह युवावस्थामा पुगेपछि भीमसेन थापाको शक्ति स्थिर भएको थियो।मुख्यतया पाण्डेहरू सन् १८०४मा भएको दामोदर पाण्डेकोको हत्याको योजनाकार भीमसेन थापालाई मान्दथे ।
उनको मृत्यु र टाउकोको रहस्य
महारानी साम्राज्य राज्य लक्ष्मीका नाबालक छोरा देबेन्द्र विक्रमलाई बिष खुवाएर मारेको आरोपमा भीमसेन थापालाई जेल हालियो। जेलमै उनले सुनेछन् 'उनकी कान्छी श्रीमतीको हुर्मत लिईदै छ'।उक्त खबर सुनेपश्चात उनि स्तब्ध भए जहा भनिएको थियो 'उनकी श्रीमती भक्तकुमारीलाई बस्त्रहिन सहर डुलाउने र थापाले त्यो दृश्य गुहुमा बसेर हेर्न पर्ने थियो । थापा त्यो बदनामी जिउंदै हेर्न र सुन्न सक्दैन थिए । वि.स १८३९ साउन ८ गते थापाले आफ्नु जीवनलाई लिएर एउटा अप्रत्यासित निर्यण लिन पुगे। उनले खुकुरीमा सेरिएर आत्महत्या गर्ने प्रयास गरे । तर हिरासतमै त्यहाँ खुकुरी कसरि पुग्यो भन्ने कुरा अझै पत्तो लाग्न सकेको छैन। केहि इतिहासकारले भने उनले खुकुरीले नभई झ्यालको सिशामा सेरिएर आत्महत्याको प्रयास गरेका बताएका थिए ।
आत्महत्याको प्रयासको खबर तत्कालिन राजा राजेन्द्र र महारानी साम्राज्य राज्य लक्ष्मी समक्ष पुग्यो र यो कुरा लाइ लिएर उनीहरु झन् क्रुर भए । उनको तत्काल उपचार गरेको भए उनि बाच्ने थिए तर राजा रानीकै आदेशमा रगतमा लत्पतिएका थापालाई बिष्णुमति नदीको बगरमा फ्याकेका थिए । बर्षातको समयमा थापा नदीकै किनारमा नौ दिनसम्म मरेका थिएनन् । अन्तत: सन् १८३९ अगस्ट ५ (वि.सं. १८९६ साउन १६) गते उनले प्राण त्याग गरे ।
थापाका विरोधीहरुले उनको अन्तिम संस्कार समेत गर्न दिएनन्। बरु स्याल,कुकुर,लाई खान दिइयो। यसरि फ्यालिएको उनको लास बाट अचानक उनको खप्पर र हाडखोर गायब भएका थिए।
भीमसेन थापाको मृत्यु पछि उनको खप्पर लन्डनको एउटा घरमा सुरक्षित रहेको भनिएको छ। खप्पर राजदुत हड्सन र हाड, बंगारा चौतरिया फत्तेजंग शाहले चोरेर लगेका थिए भन्ने कथन समेत रहेको छ। थापाको टाउकोको बारेमा हड्सनले कतै उल्लेख गरेको नपाईएको र चौतरिया सँग भएको भनिएको हाड, बंगारा पनि खान तलासी गर्दा नपाईएकोले त्यो कथन झुटो रहेको ईतिहास विद बताउछन्। कुनै तथ्यले उनको टाउको कुनै संघ्रालयमा रहेको कुरा हल्लामात्र रहेको उल्लेख छ ।तर नेपाली इतिहासमा यति ठुलो व्यक्तित्वको यति दर्दनाक मृत्यु कहिले नभएको ईतिहास विद बताउछन्। विभिन्न स्रोत वाट